Drip Irrigation, Micro Chela Tape, PVC Hose - Mingwang
Umgangatho ophezulu kunye nokusebenza kakuhle
Ukuxhamla Mingwang Izixhobo zokunkcenkceshela Co., LTD yamiselwa ngo-1985, ebekwe kwisiXeko saseBaoding, kwiPhondo lase-Hebei, e-China.Sizikhethekileyo kwiiNkqubo zokuNkcenkceshela zeMicro, ezifana neTape yeNkcenkceshelo yokunkcenkceshela, iPayipi enkulu yamanzi, i-Micro Spray Tape, i-Fittings, Sprinklers njl. Iimveliso ziyahlangabezana neemfuno zabathengi ngeendlela ezahlukeneyo zokubalula.
Sisoloko sinyanzelisa ukuhlangabezana neemfuno zabathengi kunye nokubeka abathengi phambili. Kule minyaka ingamashumi amathathu idlulileyo, iimveliso zethu zithengisiwe kwiindawo ezahlukeneyo e-China kwaye zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-40 kunye neendawo ezigubungela iYurophu, iMelika, iAfrika, iMbindi Mpuma neAsia…
Ukongeza kumzi mveliso, siye saseka inkampani yorhwebo, iya kubonelela ngeenkonzo zokuthumela ngaphandle zobuchwephesha kuwe.
IQela loPhando kunye noYilo
Yiba nophando lwezenzululwazi kunye neqela loyilo, elizinikele ekuphuhliseni nasekwenzeni iimveliso ezikumgangatho ophezulu kubathengi ...
Fumana iimveliso zakho endaweni enye
Singavelisa kwaye sinikeze uluhlu olubanzi lweemveliso zokunkcenkceshela, ezinje ngeTape yeNkcenkceshelo yokunkcenkceshela, uMbhobho waManzi oPhambili, iSpro Spray ...
Yamkela i-OEM kunye ne-ODM
Ukunikezela ngenkonzo yokumisa enye kwisampulu, uyilo, imveliso, uvavanyo kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa.
Injongo yethu kukubonelela ngokukhuselekileyo, umgangatho ophezulu kunye nesiseko semveliso esizinzileyo kwiimfuno zabathengi.
Iteyiphu yomgca oBini
Uxinzelelo lwengcinezelo-yokuHlawula (PC) kwi-Line Button Dripper
Icebo lokucoca ulwelo ngeplastiki
Venturi isichumisi Umxube wokufaka
Tyelela iBaoding Mingwang
Siyavuya kakhulu ukuba sabelane ngeemveliso zethu kunye nobuchule. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, imibuzo okanye izimvo onqwenela ukuxoxa nathi, nceda unxibelelane nathi ngqo.
Iimveliso zethu ziye zathengiswa kwiindawo ezahlukeneyo China kwaye zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-40 kunye neendawo ezigubungele iYurophu, Melika, Afrika ...
Iziphumo ezibalulekileyo zamanzi ekukhuleni kwesityalo: 1. Amanzi yinxalenye yesityalo; 2. Amandla okugcina ukuma kwezityalo: Amanzi athatha inxaxheba kwifotosinthesisi, ekuphefumlweni, ...
Amanzi amaninzi awangcono！
Ukusukela ekuqaleni kwalo nyaka, iimveliso ezininzi zezolimo ezithunyelwa kumazwe angaphandle kwihlabathi liphela zithwaxwa yimbalela, ethe yanempembelelo enkulu kuqoqosho lwehlabathi. Ye ...
Khetha inkqubo yokuNkcenkceshela iMicro, gcina yonke idriphu ...
Unkcenkceshelo lokuchela, oko kukuthi, unkcenkceshelo lokunkcenkceshela, yindlela yokunkcenkceshela ephezulu esebenzisa iseti yezixhobo ezizodwa zokufafaza amanzi phantsi koxinzelelo kwi t ...
Ngaba ukunkcenkceshela ngedriphu kubhetele kunezitshizi
1.Xa iteyiphu yokunkcenkceshela isetyenziswa phantsi kwefilimu yezolimo, ngenxa yokukhanya kwelanga, amanzi aphezu komhlaba aya kunyuka abe ngumphunga, kwaye iya kudibana kumathontsi amancinci amanzi kwifilimu yezolimo. Th ...
Amanqaku endlela yokusebenzisa unkcenkceshelo lokunkcenkceshela olunemigca emibini ...
Phantsi kwemeko enzima yentsholongwane yesithsaba esitsha, i-129th Canton Fair yaqala ngokusemthethweni efini ngo-9 kusasa ngo-Epreli 15, 2021. I-curre ...
Ibhondi yobuhlobo, iBhulorho yoRhwebo